Talooyin ku saabsan in caloosha fidsan ragga loo helo | Ragga Stylish
Nolol deggan, cunto xumo iyo jimicsi la’aan ayaa ah maaddooyinka ugu habboon ee caloosheenna ka dhigaya mid kora. Si kastaba ha noqotee, waxaan wax ka beddeli karnaa caadooyinkeena hab-nololeed si aan u helno calool fidsan waqti aan dheereyn. Waxay kuxirantahay xaddiga baruurta ee ay tahay inaan iska yareyno caloosha, waxaan yeelan karnaa calool fidsan waqti badan ama ka yar. Ku caloosha fidsan ragga waxaa si aad ah u dalbanaya sharraxaadda guud iyo bulshada.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno dhammaan talooyinka ku saabsan sida caloosha loola siman yahay ragga.
1 Calool fidsan oo ragga ah
2 Muhiimadda caloosha fidsan ee ragga
3 Talooyin lagu yareeyo caloosha
Calool fidsan oo ragga ah
In kasta oo cunnadu aysan macnaheedu ahayn dhimista cuntada la cunayo, haddana waa run inay jirto xaddidaad kalooriyadeed oo ku jirta cuntadeena. Inuu awoodo inuu bilaabo Si loo yareeyo boqolkiiba inta dufanka waxaan u baahanahay in tamar yari ku dhacdo cuntada. Tani waxay ka dhigan tahay inaan cunidoono kalooriyaal kayar inta aan qarash gareyno maalinta oo dhan. Sidan oo kale, waxaan ku guuleysaneynaa in maalin kasta aan leenahay isku dheelitirnaan xagga tamarta ah taas oo naga dhigeysa inaan bilowno inaan lumino dufankeenna.
Maskaxda ku hay in markii aan bilawno inaan miisaanka luminno, ugu horreyn inta badan miisaanka aan lumino ay iska leeyihiin dareereyaal. Tani waxay ka dhigan tahay in cuntada kalooriye-xaddidan ay tahay inay joogto ahaato waqtiga si loo bilaabo isticmaalka dufanka keydka oo ah il tamar ah. Si ay u ahaato mid joogto ah oo dhiirrigeliya waqtiga, waxaa lagama maarmaan ah in la cabbiro. Ma xakamayn karno waxa aynaan cabbiri karin. Taasi waa, markii aan ku bilaabayno qorshaheena nafaqada xaddidaadda kalooriga waxaa muhiim ah in la cabbiro boqolkiiba dufanka aan hadda leenahay iyo xayndaabkeenna oo isku laaban ayaa ah in markaa la arko isbeddelka maalmaha iyo toddobaadyada.
Waa run in jimicsigu muhiim u yahay awood u lahaanshaha luminta dufanka jirka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, waxa ay ka sheegaan sameynta fadhi ku yeelashada calool fidsan ragga waa gebi ahaanba been. Ma waayi kartid dufanka maxalliga ah sinnaba. Jidhka hiddo-wadaha ayaa u muuqda inuu lumin doono baruurta halka loogu talagalay. Haddii jirkaagu go'aansado inuu lumiyo dufanka lugta marka hore ka hor baruurta caloosha, ma jiraan wax aad sameyn kartid si aad uga noqotid amarkan.
Muhiimadda caloosha fidsan ee ragga
Maskaxda ku hay in caloosha fidsan ee ragga aysan kaliya muhiim u ahayn qurxinta jirka. Waxa jira dad badan oo caafimaadkoodu u liito sababo la xiriira boqolkiiba dufankooda oo ku urursan inta badan aagga caloosha. Meelahan waa xubno muhiim ah oo soo saari kara cudurro kala duwan haddii xaddiga dufanka caloosha uu aad u badan yahay.
Waxaa jira noocyo dhowr ah oo dufan ah oo aan ku keydinno jirkeena: dhinaca kale, waxaan leenahay subag subagga hoostiisa ah, dhanka kalena, waxaan leenahay dufanka dareeraha ah. Baruurta visceral waa tan lagu keydiyo hareeraha xubnaha jirka. Tan kuma arki karno indhaha qaawan. Waxaan u baahanahay miisaanka bioimpedance ama farsamooyin kale oo horumarsan. Dufanka subcutaneous waa kan ku keydsan maqaarka hoostiisa waana waxa nooga dhigaya muuqaal qurux badan ama ka yar.
Waxa loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo ayaa ah inaadan arki karin caloosha xitaa haddii aad sameyso tiro iyaga ka mid ah ilaa boqolkiiba dufanka calooshaadu hooseeyaan. Caadi ahaan si loo helo calool fidsan oo ragga ah iyo in la awoodo in la calaamadeeyo dhammaan maqaarka muuqda ku dhowaad 10-12% dufanka jirka ayaa loo baahan yahay. Mid ka mid ah dhinacyada lagu xisaabtamayo hagaajinta caafimaadka ayaa ah dheef-shiid kiimikaad fiican oo bilaw u ah. Waa inaad dheefshiidka sifiican uheshaa waxaanuna rabnaa inaanu raggu caloosho fidsan ku yeelano. Dheef-shiidka aan lahayn raaxo ama gubasho oo leh dheef-shiid kiimikaad dufan leh. Tani waxay muhiim ka dhigeysaa in la fiiriyo cuntada aan cunno, habka aan u diyaarinno, iyo nidaamka aan u shiidno.
Talooyin lagu yareeyo caloosha
Waxaan hadda eegeynaa qaar ka mid ah talooyinka ugu habboon ee lagu yareynayo caloosha oo lagu gaarayo calool fidsan ragga. Kahor intaan la xoojin muruqyada caloosha iyada oo loo marayo jimicsi, waxaa lagama maarmaan ah in la baabi'iyo baruurta ku jirta aaggan. Si looga tirtiro dufanka jirka jirka oo dhan, waxaa loo baahan yahay dhimista kalooriga cuntada iyo firfircoonida jirka. Tababbarka miisaanka ayaa lagama maarmaan u ah inuu awood u yeesho inuu lumiyo dufanka oo uusan noqonin murqaha hawsha. Haddii aysan jirin wax kalooris oo ku yaraada cuntada, inta soo hartay waxa aad sameyneyso dhib malahan.
Waad kordhin kartaa kharashka kalooriga maalinlaha ah adoo aadaya socod, orod, ama baaskiil wadid 1 saac maalintii. Waxay noqon kartaa wax aad u xiiso badan in la sameeyo xoogaa jimicsiyo jimicsi oo xoog leh waqti ka yar. Jimicsiyadan aerobic-ka ah kama dhigi doonaan inaad lumiso dufan badan awgood, laakiin waxay yareynayaan waqtiga aad u hurto iyaga. Haddii aad tahay qof mashquul badan oo aadan haysan inta ugu badan maalintii ee aad ugu go'an tahay laylisyada jimicsiga, waxaa fiican inaad isticmaasho jimicsiga xoogga farshaxanka.
Waan ognahay in joogteynta ay fure u tahay guusha dhinac kasta. Si calooshu u fidsan tahay ragga, Waxaad ubaahantahay inaad noqotid mid joogto ah oo aadan kafin cuntadaada ama jimicsigaaga markasta. Haddii aad joogto tahay waqti ka dib oo aad ku raaxeysato waxaad sameyneyso, natiijooyinka ayaga ayaa iskood u imaan doona.
Waxaa jira xirfadlayaal badan oo sheeganaya in inta badan cilladaha cuntada aysan ku xirneyn cuntada aad cuntid, laakiin waxay ku xiran tahay tirada adeegga. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la cuno cunto dheellitiran oo adiga kugu habboon. Uma baahnid inaad yareyso nooc kasta oo nafaqeeyayaalka jirka ah si aad dufanka u lumiso. Waxa ugu caansan waa in dufanka laga tirtiro cuntada si loo yareeyo kalooriyada. Si kastaba ha noqotee, qadar cayiman oo dufan caafimaad leh waa in lagu quudiyaa si jidhku u helo nafaqadan shaqooyinkiisa muhiimka ah.
Waa waqti go'an intaadan ku gaarin yoolalkaaga tilmaamahan. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida loo helo calool fidsan oo ragga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Dabayl fidsan oo ragga ah